That's so good, right?: အပြုံးလေး (ပထမပိုင်း)
အခိုးတွေ လွင့်မြောကာ မြူတွေရစ်သိုင်း နေပြီးစိမ်းညို့ ဖန်ကာအုံ့မှိုင်းနေသည့် ရှမ်းရိုးမကြီးကိုခပ်ဝေးဝေးမှမြင်နေရသည်။ လှပလှပေစွ သဘာဝတရားကြီးရယ်။ မနက်ခင်းစောနေသေးသဖြင့်နေမပွင့်သေးချေ။ နွေရာသီကုန်ကာစ မိုးရာသည်သို့ရောက်ခါနီး ကျောင်းဖွင့်ချိန် ဤရာသီဥတု၏ မနက်ခင်းအလှသည် သဘာဝတရာကြီး၏ ပြီးပြည့်စုံစွာ ခြယ်မှုန်းထားခြင်းခံထားရသဖြင့်ကျက်သရေရှိစွာ လှပနေခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ချယ်ရီတွေ ဖူးပွင့်သည့်မြေ နှင်း တွေဖွဲဖွဲလှုပ်ကျတတ်သည့်မြေ အိုးစည်ဗုံမောင်းသံတွေ စည်စည်ညံနေတတ်သည့်မြေ သည်မြေကိုကျွန်တော်ချစ်သည် မြတ်နိုးသည် တန်ဖိုးထားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၏ ရိုးရာအစားအစာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်တော်သည်အညာဒေသမှာ မွေးဖွားခဲ့သည့် ဗမာတစ်ယောက် ဖြစ်လင့်ကစား ငယ်ငယ်ကတည်းက ရှမ်းပြည်နယ်မှာပဲကြီးပြင်းခဲ့သောကြောင့် ယခုဆိုလျှင် စကားပြောရင်တောင် ရှမ်းသံဝဲနေပြီဖစ် သည်။တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် ရှမ်းသွေးရောနေသည့် ဗမာတစ်ဦးကဲ့သြို့ဖစ်နေသည်။ ယခုကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့် ဈေးထဲ သို့သွားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟင်းချက်စရာတွေဝယ်မည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောမေမေ့ကို ကျွန်တော့်လက်ရာဟင်းတွေ ချက်ကျွေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤသြို့ဖင့် မနက်ခင်းဈေးထဲသို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိသွားသည်။
မနက်ခင်းဈေးကြီးမှာ ဆိုင်ခန်းတွေဖြင့်စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပေ။ မြေနီနီပေါ်တွင်သစ်သားခုံများ ဝါးတန်းလျားများဖြင့် ဖြစ်သလိုရောင်းချကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။တစ်ချို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်သယ်များသည် မြေကြီးပေါ်တွင် ငှက်ပျောရွက်ကလေးသာခင်းပြီး ရောင်းကြသည်။ ဈေးထဲတွင်လူတွေ ကျိတ်ကျိတ်တိုးစည်ကားနေသည်။ တစ်နေရာအရောက်တွင် ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေ ရပ်တန့် သွားသည်။ ဈေးလည်ခေါင်တွင် အသားမဲမဲ ဂင်တိုတိုနှင့်လူတစ်ယောက်သည် မောင်းကြီးတစ်ခုကိုကိုင်ကာ တဒူဒူထုနေသည်။ ၄င်း၏အနီးတွင်တော့ကြိမ်ကုလားထိုင်ခြုံဖင့် တရုတ်ဝဝကြီးတစ်ဦးထိုင်နေသည်။
‘လာကြနော် လာကြ လာကြ.......ပစ္စည်းတွေဈေးပေါပေါနဲ့လေလံပစ်မယ် လာကြ လာကြ’
‘ဒူ ဒူ ဒူ ဒူ’
‘လာကြနော် ပစ္စည်းတွေအလကားရသလိုကိုဈေးပေါတာ…… လေလံပစ်မယ်ဟေ့’
ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားသည်။ ဘာပစ္စည်းတွေများလေလံပစ်မည်မသိပါ။ ထို့ကြောင့်သိချင်စိတ်ြဖင့်အနားသို့ တိုးကပ်သွားကြည့် လိုက်၏ ။ ပစ္စည်းတွေက စုံလင်လှသည် တရုတ်နိုင်ငံလုပ်အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ၊ ကြွေထည်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်သည်။ အိမ်ရှင်မတွေ မျက်စိကျစရာပါပင်။
ကြော်ငြာသူက ဆော်သြမှုကောင်း၍လားမသိ ခဏလေးအတွင်းမှာ ပင် လူတွေပြည့်လျှံသွားသည်။ကျွန်တော်ပင်အရှေ့သို့ ရောက် အောင်မနည်းတိုးကြည့်ရသည်။
‘ဟောဒါလေးကတော့ လျှပ်စစ်မီးပူလေးပါ။ ဂျပန်နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တရုတ်မိတ်လေးပေါ့ဗျာ။ အပြင်မှာ သွားဝယ်ရင် အနည်းဆုံးသောင်းဂဏန်းရှိပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား ဒီမီးပူလေးကို ကြမ်းခင်းဈေးငွေနှစ်ထောင်နဲ့ လေလံပစ်ပါတယ်’
‘ဟုတ်ကဲ့ ခြောက်ထောင်ထပ်ပိုပေးမယ့်သူ ရှိပါသေးလားခင်ဗျား’
ထိုလူက အာဘောင်အာရင်း သန်သန်ဖြင့် ပြောနေသည်မှာ တစ်ခါတစ်ခါ ၄င်းပါးစပ်ထဲမှတံတွေးများစင်သည်အထိပင်။ ခြောက်ထောင်ပြီးနောက် မည်သူမှအသံထွက်မလာတော့ချေ။
‘ဟုတ်ကဲ့ ခြောက်ထောက်တစ်ကြိမ် ခြောက်ထောက်နှစ်ြကိမ် ခြောက်ထောက်သုံးကြိမ်’
‘ဒူ ဒူ ဒူ’
‘အခုဆိုရင်ြဖင့်ခြောက်ထောင်ထပ်ပိုပေးမယ့်သူ မရှိတော့တဲ့အတွက် ဟောဒီ့ကအမကြီးက ဂျပန်နည်းပညာ တရုတ်မိတ်လျှပ်စစ် မီးပူလေးကို ငွေခြောက်ထောင်နဲ့ ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား’
ထိုသူစကားဆုံးသောအခါ လူအုပ်ြကားထဲမှ မိန်းမဝဝတစ်ဦးထွက်လာကာ ငွေခြောက်ထောင်ပေးပြီးပစ္စည်းကိုယူကာပြန်ထွက်သွားသည်။ ထို့နောက် လေလံဆြော်သသူက သေတ္တာ တစ်လုံးကို၎င်း၏ပစ္စည်းပုံထဲမှ ဆွဲထုတ်လာကာ သေတ္တာ အဖုံး ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး အထဲမှဘာမှန်းမသိသောအထုတ်လေးတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လာသည်။
‘ဟောဒီပစ္စည်းလေးကတော့ ဘာပစ္စည်းမှန်းကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး။ ဒီပစ္စည်းလေးကိုငွေငါးရာနဲ့ပဲလေလံပစ်ပါတယ်’
‘ဟေ့လူ ခင်ဗျားဟာကလဲ ဘာပစ္စည်းမှန်းမသိပဲနဲ့ လေလံပစ်နေရသေးလား’
နံဘေးမှလူတစ်ယောက်က ထပြောလိုက်သောအခါ အနားရှိလူတွေအားလုံးဝါးကနဲ ပွဲကျသွားသည်။
‘ဒါကတော့ ဟော ဟိုမှာ ထိုင်နေတဲ့ တရုတ်ြကီးကိုမေးကြပါ။ ကျွန်တော်က သူ့အလုပ်သမားပါ။ ဒါတွေအားလုံးသူ့ပစ္စည်းတွေပါ။ သူပိုသိပါတယ်’
ထိုအခါထိုင်နေသော တရုတ်ြကီးသည် အနားသို့ထလာကာ ထိုလူ၏ လက်ထဲမှပစ္စည်းကိုပြန်လုယူလိုက်သည်။
‘ဒီကောင် အားကီးလျှောက်လုပ်လယ်။ ဒီပစ္စည်းကိုဝမရောင်း ပါဘူး။ ဒါမှားပြီးပါလာတာ ဝမိန်းမသုံးတဲ့ပစ္စည်း ရောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး’
‘ဟား ဟား ဟား ဟား’
လူတွေအားလုံးဝါးကနဲ ထရယ်ကုန်ြကသည်။ ကျွန်တော်လည်းပြုံးလိုက်မိသည်။ လေလံပွဲကစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့သဖြင့် ကျွန်တော်လိုအပ်သည်များ ဝယ်ရန်ချမ်းရန်ဈေးထဲသို့ပတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် အနောက်သို့လှည့်ကာ ပြန်ရန်ပြင်လိုက်စဉ်
‘ဟာ ဆောရီးအကို ဆောရီး ဆောရီး’
ကျွန်တော်ခေါင်းကိုမြော့ကည့်လိုက်သည် ကျွန်တော့်ကိုတိုက်မိသောကောင်လေးကိုမြင်လိုက်ရသောအခါ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး အေးစက်တောင့်တင်းသွားသည်။ ကျွန်တော့်ရင်တွေတဒိတဒ်ိတ်ခုန်လာသည်။ ကျွန်တော်နှင့်တိုက်မိသွားသောကောင်လေးက ကျွန်တော့်ကိုထူးထူးခြားခြားတောင်းပန်တာ ပြုံး၍တောင်းပန်နေသည်တဲ့။ သူ့ရဲ့အပြုံးလေးသည် ကျွန်တော့်ကို အြံ့သမင်သက် သွားလောက်အောင် ချိုမြိန်လွန်းလှသည်။ ထို့နောက်ထိုကောင်လေးက ကျွန်တော့်ကိုလက်ကမ်းပေးပြီး ပြန်ထူပေးပါသည်။
ကောင်လေး၏ မျက်နှာကိုကျွန်တော် စေစပ်စွာ ကြည့်မိသည်။ ကောင်လေးသည်ကျွန်တော်နှင့်အသက်ရွယ်တူခန့် ရှိမည်ဟုထင်ရသည်။ ကောင်လေး၏ မျက်ခုံးမှာ မဲနက်နေကာ နဖူးပြင်အောက်တွင် ညီညာစွာ မည်းညို့နေပြီး မျက်လုံးသည်လည်း မဟူရာရောင် တောက်ပ နေသည်။နှာတံလေးမှာ လည်းစင်းနေပြီး လူငယ်ချောလေးတစ်ယောက်ပါပင်။ကျွန်တြော်ကည့်ကောင်းကောင်းဖြငြ့်ကည့်နေတုန်း ကောင်လေးကကျွန်တော့်ကိုထပ်ပြုံးပြကာကျွန်တော့်ရှေ့မှ ထွက်ခွာသွားသည်။ ထိုကောင်လေးအပြုံးကို မြင်လိုက်တော့ကျွန်တော့်ရင်ထဲ သိမ့်ကနြဲဖစ်သွားသည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အပြုံးလေးပါပဲ။
ကျွန်တော်ထိုကောင်လေးရဲ့ ကျောပြင်ကြိုကည့်ကာ ရင်ထဲတွင်သူ့ကိုနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မိသည်။
မိုးလင်းတိုင်းလည်းမင်းစိတ်ပဲ++++++မိုးချုပ်တိုင်းလည်းမင်းစိတ်ပဲ ++++ခဏတော့ခွဲသွားမင်းမျက်နှာ ငါတစ်ကယ်ဦးညွတ်သွားပြီပဲ ++++++နောက်ထပ်မင်း နဲ့တွေ့ဆုံပါရစေ နောက်ထပ်မင်းနဲ့တွေ့ခွင့်ရပါစေ+++++ဒီလိုအခွင့်ရေးမျိုးကိုလည်း အချိန်ရှိတိုင်းပဲ စောင့်နေ+++++++ဘယ်သူဘယ်ကမှန်းလဲမသိပါ++++++++ဒီမျက်ဝန်းလေးထဲမှာငါတစ်ကယ်ကပ်ငြိသွားလို့ မေ့မှာ စိုးတယ်+++++++’
‘အမေကလည်း နားထောင်တုန်းတန်းလန်းကြီး ပိတ်ပစ်ရသလား’
‘နားတွေငြီးလှပါပြီသားရယ် ဒီမှာ အကျီင်္စညှပ်ရတာတောင် အာရုံမလာတော့ဘူး’
ကျွန်တော်မေမေ့ကို မကြည်သလို စူပုပ်ပုပ်မျက်နှာဖြင့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ စက်ချုပ်ဆရာမပီပီမေမေသည် ပေကြိုးကြီးကို လက်တွင်ပတ်ထားကာ လုံချည်တွင်လည်းအပ်ချည်မွှေးတစ်ချို့ကပ်နေသည်။ မေမေသည်အိမ်၌ပင် စက်ချုပ်သည်။ မေမေ့လက်ရာက ကောင်းမွန်သည်ကတစ်ကြောင်း ဆက်ဆံရေးကောင်းသည်ကတစ်ကြောင်းကြောင့်မေ့မေ့စက်ချုပ်လုပ်ငန်းသည် ကျွန်တော်တို့သားအမိ နှစ်ယောက်အတွက် ဖူဖူလုံလုံနေနိုင်စားနိုင်သည်။ယခုဆိုလျှင်မေမေ့တွင် စက်ချုပ်လာသင်သည့် တပည့်တပန်း များစွာဖြင့်တော်တော် ဟုတ်နေပြီဖြစ်သည်။
‘ကဲ….မောင်ချစ်ရဲအောင် ရပ်ြပီးစူပုပ်ပုပ်ြကီး လုပ်မနေနဲ့ သုံးနာရီထိုးတော့မယ် ရေသွားချိုးချေတော့’
‘ခဏနေအဆောင်ကိုစာသွားသင်တော့မယ့်လူက အေးတိအေးစက်နဲ့ တကယ်တော်အြံသတယ်’
‘အမေကလည်းတွေဘာတွေလုပ်မနေနဲ့ သွားလုပ်စရာရှိတာလုပ်တော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ငါ့မှာ နားတွေညီးလိုက်တာဆိုတာလေ ဒီ ကတ်ဆက်ြကီးကို ရောင်းပစ်ဦးမယ် နားညီးသက်သာအောင်လို့’
မေမေအ့ကြောင်းသိနေသည်မို့ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘဲ ရေချိုးရန်ထွက်လာခဲ့သည်။မေမေကပူညံပူညံ လုပ်ြပီဆိုလျှင် ပြောလို့ မပြီးတော့ချေ။ ကျွန်တော့်တွင်သည်အမေတစ်ယောက်သာရှိတော့သည် အမေတင်ခုသားတစ်ခုဆိုလျှင်လည်းမမှားပါ။ ၂၀၀၈ခုနှစ် တွင်ကျွန်တော် ဆယ်တန်းအောင်သည်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်သေးသဖြင့် အဝေးသင်သာယူခဲ့သည်။ ယခုတော့ ကျွန်တော်တက်ခဲ့သည့်ဆယ်တန်းဘော်ဒါဆောင်မှ study guide ပြန်ခေါ်သဖြင့် အလုပ်ရှာမတွေ့သေးသည်ကတစ်ကြောင်း ဣနြေ္ဒ ရရသိက္ခာ ရှိရှိလုပ်ရသည်ကတစ်ကြောင်းကြောင့် ပိုက်ဆံရသည်မရသည်ကိုအဓိကမထားဘဲ guide လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သည်နေ့ဆိုလျှင်တစ်ပင်ပြည့်တော့မည်လေ။
ရေချိုးခန်းထဲရှိ ရေပန်းခလုတ်ကို ဖွင့်လိုက်သည်။ တဝေါဝေါကျလာသော ရေမှုံရေမွှားတွေအောက်သို့ကျွန်တော်ခေါင်းဝင်ကာ စိမ်ပြေနပြေချိုးနေလိုက်သည်။ ရေချိုးပြီးသွားသောအခါအဝတ်အစားသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ကာ အိမ်မှထွက်လာခဲ့သည်။ ဆရာဆိုတော့ လူကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့သန့်ပြန့်နေမှ လူလေးစားမည်လေ။ ကျွန်တော် တစ်ချက်ြပုံးလိုက်ရင်း ဆိုင်ကယ်ကိုဂီယာချိန်းကာလီဗာတင်လိုက်ပြီး အရှိန်ြမှင့်မောင်းနှင်လာခဲ့သည်။
အဆောင်ကိုရောက်တော့ တပည့်မလေးတစ်ယောက်က တံခါးလာဖွင့်ပေးသည်။ ‘ဆရာကအခုမှလာတယ် ဟိုမှာ ဧည့်သည်ရောက် နေတယ် အဆောင်အပ်မလို့တဲ့ စောင့်ခိုင်းထားရတာကြာပေါ့’
‘ဟုတ်လား ဆရာမရှိဘူးလား’ ကျွန်တော်တို့အဆောင်က ဘော်ဒါဆောင်ကျောင်းအုပ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
‘မရှိဘူးဆရာရဲ့ သူ့ကလေးနေမကောင်းလို့တဲ့ ဆေခန်းသွားပြတယ်’
‘ဒါဆို ကျောင်းသားတွေကိုပြောလိုက် ခဏနေသချာင်္ ဆရာလာတော့မယ် စာအုပ်ထုတ်ပြီးအဆင်သင့်လုပ်ထားလို့။ method တွေပေးထားတာလဲအလွတ်ရအောင်ကျက်ထားကြလို့။ ဆရာဧည့်သည်တွေနဲ့ သွားစကားပြောလိုက်ဦးမယ်’
ကျွန်တော်တို့ အဆောင်လေးသည် သာမာန် ရိုးရိုးအဆောင်လေးသာဖြစ်သည်။ အဆောင်တွင်စာပြသည့် ဆရာအချို့ကို ပြင်ပမှ ငှါးရမ်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး အဆောင်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနှင့် ကိုယ်ဖိရင်ဖိရှိနေတတ်သည်က ကျွန်တော်ရယ် ဂိုက်ဆရာမ တစ်ယောက်ရယ်နှင့်ဘော်ဒါအုပ်ဆရာသာရှိသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသည်အဆောင်မှအောင်လာသည် ဖြစ်သောကြောင့် ဘောဒါဆောင်ကျောင်းအုပ်ဆရာနှင့်လည်းမိသားစုလိုဖြစ်နေသည်။ထို့ကြောင့်ဆရာမရှိသည့် အခါများတွင်ကျွန်တော်က ဆရာ့ကိုယ်စား အဆောင်ကိစ္စတွေကိုဝင်လုပ်ပေးရသည်။ ကျောင်း သားသစ်လက်ခံရန် စာရွက်စာတမ်းတစ်ချို့ စားပွဲအံဆွဲထဲမှယူလိုက်ပြီးဧည့်ခန်းထဲ သို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ ဧည့်ခန်းထဲသို့ရောက်သော် အသက်လေးဆယ်ခန့်လူကြီးတစ်ဦးနှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ထိုင်နေသည်။
‘စောင့်နေရတာ ကြာနေပြီလား။ အားနာလိုက်တာဗျာ။ ဘော်ဒါအုပ်က ကလေးနေမကောင်းလို့ ဆေးခန်းသွားပြတယ်ဗျ။ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ပဲ အကြမ်းဖျင်းပြောထားနိုင်ပါတယ်’ ကျွန်တော့်စကားဆုံးတော့ ထိုလြူကီးက ကျွန်တော့်ကြိုကညြ့်ပီး ပြောသည်။
‘ဪ ကျွန်တော်က ဒီက စာသင်guide…အဲ ဆရာပါ’
‘ဪ ဟုတ်လားငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာပဲ။ ဒီလိုပါကွယ်ဦးသားက မနှစ်ကစာမေးပွဲမှာကျန်းမာရေးကြောင့် ဖြေတုန်းတန်းလန်းကြီး နားလိုက်ရတယ်။ အဒဲ့ါresult မထွက်သေးပေမယ့်မအောင်တော့ဘူးဆိုတာ သိနေတယ်လေ။ ဒါကြောင့်မိုလို့ စောစောစီးစီး ကျုရှင်အပ်တဲ့သဘောမျိုးပါ’
‘ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်ဦး ကျုရှင်ဈေးကိုတော့ မနက်ဖြန်ကျမှပဲ ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးပါဦး။ ကျောင်းသားကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပဲအပ်ခဲ့ပါ’
ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဖောင်တစ်ချို့ကိုသူတို့ရှေ့သို့ချပေးလိုက်သည်။ ကျောင်းသားသစ်ကလေးကိုကျွန်တော်အခုမြှကည့်မိသည်။ မနေ့က ကျွန်တော်နှင့်ဈေးထဲတွင်အမှတ်မထင်ဝင်တိုက်မိသွားသည့်ကောင်ကလေး။ ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြီးတောင်းပန်သည့် အပြုံးလေး ပင်ြဖစ်သည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ သူ့ကြိုမင်လိုက်ရတော့ လှိုက်ကနဲဝမ်းသာသွားသည်။
ကောင်လေးသည်ကျွန်တော့်ကြိုမင်လိုက်သောအခါ အြံ့သသွားသည့်ဟန်ြဖင့် မျက်ခုံးပငြ့်ပသည်။ထို့နောက် ဘယ်ဖက်ပါးမှ ပါးချိုင့်လေး ပေါ်အောင် ပြုံးလေသည်။ ကောင်လေးသည် ရှပ်င်္အကျီဝါဖျော့ဖျော့လေးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီး ဂျင်းသားအနက်ရောင်စိုစိုကိုတွဲဝတ် ထားသည်။အသားအရေမှာ မဖြူလွန်းသော်လည်း ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိသည်။
ကျောင်းသားအသစ်တွေဖြည့်ရသော ဖောင်တစ်ခုထဲတွင် လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်ရေးနေသောကောင်လေးကို ကျွန်တော်အသက်ရှု ဖို့မြေ့ပီး ငေးကြည့်နေမိသည်။ဆံပင်အတိုကို ဂျယ်ဖြင့်ထောင်ထားပြီး ဘယ်ဖက်နားတွင် စိန်ပွင့်သဏ္ဌာ န်နားကပ်သေးသေးလေးကို တပ်ထားသေးသည်။ ကောင်လေးက ဖောင်ဖြည့်လြို့ပီးသွားသောအခါ ကျွန်တော့်ကိုကမ်းပေးသည်။ ကျွန်တော်သိချင်ဇောဖြင့်ကောင်လေး နာမည်ကို ဖောင်ထဲတွင်လှန်ြကည့်လိုက်၏။
အမည်ဟူသောနေရာတွင် ဖြည့်ထားသည့် ကောင်လေးနာမည်က ဇင်မင်းသူတဲ့။
‘အီကိုမှာ အခန်းခြောက်ခန်းရှိတယ် အဲ့ဒီခြောက်ခန်းထဲက သုံးခန်းကိုပိုင်ရင် ဂုဏ်ထူးမထွက်ရင်တောင် အောင်မှတ်ကတော့ပြေး မလွတ်ဘူး။ တွက်ပုစ္ဆာ က ဆယ်မှတ်ဖိုးပါတယ်။ ကျက်စာမပိုင်တဲ့သူတွေကတွက်စာဖြေလို့ရတယ်။ ကွက်လပ်ဖြည့်နဲ့မှားမှန် က အမှတ်နှစ်ဆယ်ဖိုးပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ဆယ်မှတ်တန်နဲ့ နှစ်ဆယ်မှတ်တန်ကို အခန်း ၁,၃,၅, နဲ့ ၂,၄,၆ ထဲကမျှပြီးမေးသွားတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင်မေးခွန်းကို သဘောပေါက်လောက်ရောပေါ့’
‘နောက်ပြီးတော့ Definition တွေလည်းကျန်သေးတယ်။ အဲဒါလည်း မျှပြီးမေးတာပဲ’
‘မေးခွန်းဟောင်းစာအုပ်တွေမှာ မေးခွန်းပုံစံတွေရှိတယ်။ လေ့လာကြည့် နားမလည်ရင်ဆရာ့ကိုထပ်မေးပေါ့ ဟုတ်ပြီလား’
ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုEco မေးခွန်းအကြောင်း မေးနေသဖြင့်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြင့်ရှင်းပြနေရသည်။ guide ဆရာဟုဆိုသော်လည်း ကျွန်တော်သည် ကျောင်းသားတွေနှင့်မတိမ်းမယိမ်းသာရှိသည်။ နှစ်ကျသမားများထပ်ရောက်လာပါက ကျွန်တော့်ထက်အသက်ြကီးသည့်သူတွေပါချင်ပါလာနိုင်သည်။ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးသည့် သူကဆရာဟုခေါ်မှာ ကိုတော့ ကျွန်တော်နည်းနည်း ကြက်သီးထချင်သည်။ ဆယ်တန်း guide လုပ်ရသည်မှာ လွယ်တော့ မလွယ်ပါ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ြကည့်မှ မည်မျှခက်ခဲသည်ကို နားလည်လာသည်။ ကျောင်းသားကိုစာရှင်းပြပြီးထိုင်ခုံမှထရန်ြပင်လိုက်စဉ် ကလစ် ဆိုသောဓာတ်ပုံရိုက်သံလေးကို အမှတ်မထင်ြကားလိုက်သည်။ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူကများ ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်လိုက်ပါလိမ့်။ ကင်မရာ က မီးမလင်းပဲအသံသာကြားရသည်ဆိုတော့ ဖုန်းနှင့်ရိုက်တာဖြစ်ရမည်။ ဘယ်သူပါလိမ့်ကျွန်တော်တရားခံကို ရှာဖြွေကည့်မိသည်။ ညစာကျက်ချိန်ဖြစ်၍ ကျောင်းသား။သူတွေကအေးအေးဆေးဆေး စာလုပ်လျှက်ရြှိကသည်။ မိန်းကလေးတွေတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ မိန်းကလေးခုံများမှာကျွန်တော့အရှေ့တွင်ရှိသောကြောင့် ကျွန်တြော်မင်နေရသည်။ ယောကျာ်းလေးတွေဆီက ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်လှည့်ပတ်ြပီးရှာ ဖြွေကည့်သည်။ သို့သော် မတွေ့။ ဇင်မင်းသူတို့ထိုင်သည့်ခုံနားသို့ရောက်သောအခါ ကျွန်တော်ဆက်မရှာ ဘဲ ဇင်မင်းသူကြိုကည့်နေလိုက်သည်။ကျောင်းသားသစ်ဖြစ်သောကြောင့် ခေါ်ဖော်ပြောဖော် မရှိဘဲ တစ်ယောက်ထဲစာထိုင်လုပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူ့ကိုကျွန်တော်ငေးကြည့်နေတုန်း သူခေါင်းမော့လာသည်။ ထို့နောက်ရုတ်တရက် သူမျက်လွှာအပင့်မှာ ကျွန်တော်နှင့် အကြည့်ချင်းဆုံသွားသည်။ သူခိုးလူမိသလို ချက်ချင်းကြီးကျွန်တော်ခိုးကြည့်တာပေါ်သွားသဖြင့် ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်း မသိဘဲ ရှက်သွားမိသည်။ ကောင်လေးကကျွန်တော့်ကြိုကညြ့်ပီးပြုံးပြသည်။
ရင်ထဲစူးနင့်စွာကြွေလွင့်သွားရပါပြီ။ဟုတ်သည် ကျွန်တော်သည် အပြုံးတစ်ခုအောက်တွင် ရက်ရက်စက်စက် ကြွေလွင့်ခဲ့ပါသည်။ အပြုံးလေးအဆောင်ကို စတင်ရောက်လာသည့်နေ့မှစ၍ ကျွန်တော်သည်အပြုံးတစ်ခု၏ ချိုမြိန်ြခင်းအောက်တွင် မိန်းမောသာယာ နေခဲ့ပြီ။
ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေမြန်သထက်မြန်လာသည်။ သူ့ကိုအားနာပါးနာဖြငြ့်ပန်ြပုံးပြလိုက်ပြီးအနောက်သို့လှည့်ကာ ရှောင်လွှဲမည်အပြု တိုးညှင်းအေးမြ ချိုသာသည့်ခေါ်သံလေးထွက်ပေါ်လာသည်။
ကျွန်တော် ရုတ်တရက် မှင်သက်သွားသည်။ Guide ဆရာလေးတဲ့။ နားဝင်ချိုလှပါဘိ။ ကျွန်တော်ပြန်လှညြ့်ကည့်လိုက်သည်။
ကျွန်တော် သူ့အနားသို့လျှောက်သွားလိုက်၏။ အနားသို့ရောက်သောအခါ သူ့နဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ကောင်လေးဆီမှ ခေါင်းလိမ်းဆီနံ့က သင်းနေသည်။ အနားရောက်မှပိုပြီးချစ်ဖို့ကောင်းမှန်း သတိထားမိသည်။ ကျွန်တော်ဒူးတွေပင် မခိုင်ချင်တော့။
‘ဟောဒီ့ပုစ္ဆာ မတွက်တတ်လို့ ကျွန်တော့်ကိုတွက်ြပပါလားဗျ’
ကျွန်တော်သူပြသည့် စာကြိုကည့်လိုက်တော့ ပုစ္ဆာ ကလွယ်လွယ်လေးပါ။ ဒါကိုမတွက်တတ်ဘူးဟုပြောနေသည်။
‘ဒီပုစ္ဆာ က လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ chapter တွေမှာ နမူနာ ပြထားတဲ့ပုစ္ဆာ လောက်တောင် မခက်ပါဘူး။ကျွန်တော် အဲ့..ဆရာတွက်ြပမယ် သေချာကြည့်နော်’
ကျွန်တော်သူ့ကြိုကည့်လိုက်မိသည်။ ပြောင်ချော်ချော် မျက်နှာပေးဖြင့်ကျွန်တော့်ကို ပြုံးကြည့်နေသည်။တကယ်မတွက်တတ်တာရော ဟုတ်ရဲ့လားမသိပါ။
‘အရင်ဆုံး ညီမျှခြင်းထိုးမယ်ပြီးရင် ဒီနှစ်ထပ်ကိန်းတွေကိုအရင်ရှင်းရမယ်။ root တင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုlog ကြည့်လိုက်ပြီးရင် ကြက်ခြေခတ်မြှောက်ပြီး ကွင်းတြွေဖုတ်လို့ရပြီ’
ကျွန်တော်ပြောပြီးပြန်မြော့ကည့်လိုက်သည်။ ဘုရားဘုရား သူစာကိုမကြည့်ပဲ ကျွန်တော့်ကိုမေးထောက်ြပီးကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ ဘာကြောင့်မှန်းရယ်မသိ အေးစက်လာ၏။
‘ကွင်းတွေဖြုတ်ြပီးသွားရင် ဒီမှာ ကြည့် နောက်တစ်ဆင့်က......’
‘ဆရာလေးက ဒီမှာ အိပ်တာလားဗျ’
‘အင်.......မဟုတ်ပါဘူး အိမ်မှာ ပြန်အိပ်တာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ’
‘ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး မေးကြည့်တာပါ။ ဟိုတစ်နေ့က ဈေးထဲမှာ ကျွန်တော်နဲ့တိုက်မိသွားတာဆရာလေးမို့လား’
‘ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားလေးကိုတကယ်မမြင်လို့ပါဗျာ။ လျှော်ကြေးတောင်းမလို့လား’
‘ဟားဟား မဟုတ်ပါဘူး………. ဆရာလေးကခင်ဖို့ကောင်းသားပဲ’
‘အင်း……… နောက်စာမရလို့ရိုက်မှ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ြဖစ်နေဦးမယ်။ ကဲကဲ ဒီပုစ္ဆာ လွယ်တယ်တွက်ြကည့်ပါဦး’
ထို့နောက် သံလိုက်ဓာတ်လို ညို့နိုင်လွန်းသည့် သူ့အနားမှ ထွက်လာခဲ့သည်။
ကိုယ့်ကို အပြုံးနုနုလေးတွေနဲ့ မျှားမလို့လား ကောင်လေး ရယ်။ မင်းအပြုံးမှာ ကိုယ့်နှလုံးသား ငြိတွယ်ပါသွားရင် တစ်သက်လုံး တာဝန်ယူကြေးနော်…
တစ်ပတ်ခနြ့်ကာလာသောအခါ ကျွန်တော်နှင့်အပြုံးလေးသည် အတော်လေးရင်းနီးမှုရခဲ့သည်။မယုံနိုင်အောင်ပဲ သူ့ဖက်ကကျွန်တော့်ကို သူများတွေထက်ပိုပြီး လိုလိုလားလားဆက်ဆံသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည် သာမာန်ဆရာတပည့်နှစ်ဦးလို မဟုတ်ဘဲ
သူငယ်ချင်းတွေလိုဖြစ်နေသည်။ တစ်ခါတစ်လေကျလျှင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စိတ်သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်နေတတ်တာကိုလည်း ကျွန်တော်အံ့သြခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော်လည်းအဆောင်ကိုခါတိုင်းထက်ပိုစော၍ သွားနေတတ်ခဲ့သည်။ စာသင်ရသည်မှာလည်းခါတိုင်းထက်ပြိုပီးရွှင်ရွှင်လန်း လန်းဖြစ်နေသည်။ အရာရာဟာ ကျွန်တော့်အတွက် သာယာလှပတဲ့ကမ္ဘာ ကြီးတစ်ခုလိုပဲ ချိုမြိန်နေပါသည်။ ကြာတော့ မေမေကပင်ရိပ်မိလာသည်။
‘ငါ့သားလေးက အခုတစ်လော တယ်ချောနေပါလား။ အဆောင်ကိုသွားရင်လည်း သနြ့်ပန့်နေတာပဲ ရုပ်ရှင်မင်းသားရှုံးလောက်တယ်’
‘မဟုတ်ပါဘူး သားကိုအမေအခုတစ်လောမှ သတိထားမိသလိုပါပဲ’
‘ဪဒါနဲ့ သားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လေ ဟိုနေ့ကအမေနဲ့ဈေးထဲမှာ တွေ့တယ်၊ အမယ်သူကကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တော့ သိလား’
‘နေပါဦး နာမည်းက ပါစပ်ဖျားလေးတင်မေ့နေတယ်’
‘အေးအေးဟုတ်တယ် သူတို့နှစ်ယောက်ကို Under Close ဆိုတဲ့အအေးဆိုင်မှာ တွေ့ခဲ့တယ်’
‘Under Cloud ပါအမေရယ်။ ဥက္ကာ ကရည်းစားတွေတောင်ရနေပြီကိုး’
‘ဪ သိပါဘူး ငါတော့ပါးစပ်ဖျားမှာ Under Close လို့ပဲဆွဲနေတာ။ နင်ကောဘယ်တော့လဲ’
ကျွန်တော်ရယ်ချင်သွားမိသည်။ ထို့နောက် ထမင်းလုတ်ကို ရေသောက်ပြီးမျှောချလိုက်ရသည်။ ‘အမေ့အတွက် သားတစ်ယောက် အပိုရအောင်ရှာနေပါတယ်’ ဟုပြောလိုက်လျှင် အမေဘယ်လိုနေမည်မသိပါ။
‘မရှိသေးပါဘူးအမေရယ် ရည်းစားဆိုလို့မူးလို့တောင် ရူစရာမရှိဘူး’
‘အင်းပါအမေရယ်။ အမေ money in the pocket ဆိုတာသိလား’
ကျွန်တော်တစ်ချက်ရယ်လိုက်ြပီး အိပ်ကပ်ကိုလက်ညိုးထိုးကာ ‘အိပ်ကပ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူးတဲ့ အမေရဲ့။ သားကိုမုန့်ဖိုးလေး မစပါဦး။ ဘိုင်ပြတ်နေတယ်အမေရာ သားမှာ ဆိုင်ကယ်ဆီဖိုးတောင်မရှိတော့ဘူး။ ဖုန်းကဒ်ကလည်းပိုက်ဆံကုန်တော့မယ်’
မေမေကကျွန်တော့်ကို ခပ်ဆဆလေးမျက်စောင်းထိုးလာသည်။ ထို့နောက်သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ရယ်သံတွေဖြင့် ညစာ ထမင်းဝိုင်း လေးသည် သာယာစိုပြေသွားခဲ့သည်။စားလို့သောက်လြို့ပီးသွားသောအခါ မေမေ့ကို ပန်းကန်တွေကူသိမ်း ပေးရင်း စကားစမြည် ပြောကာအချိန်ကုန်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော် အိပ်ယာဝင်ခဲ့သည်။ အိပ်ယာထဲတွင်အိပ်မပျော်သေးသည်နှင့် စိတ်ကူးတြွေဖန့် ကြန့်ရင်းအတွေးတွေ နယ်လွန်နေမိသည်။ ကောင်လေးကျွန်တော့်ရဲ့ အပြုံးလေးအကြောင်းက ရုတ်တရက် ခေါင်းထဲရောက်လာသည်။ သူ့အကြောင်းစဉ်းစားမိလိုက်ြပီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘယ်ဖက်ရင်အုံက နွေးထွေးလာပြီး ညှင်းသဲ့သဲ့ရင်ခုန်သံတွေ စတင်တိုးဝှေ့ရိုက် ခတ်လာပါတော့သည်။
တော်တော်ချိုမြိန်သည့်ကောင်လေး တစ်ယောက်ပါပဲဟု ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဇွတ်အတင်းအမှတ်တွေပေးနေမိသည်။ ကာရန်မဲ့ တိမ်လွှာ စိမ်းစိမ်းကြီးတွေအောက်က ပင့်သက်ချ စမ်းချောင်းငယ်လေးတစ်ခုလို ကောင်လေးရဲ့ ဆွတ်ပျံ့ပျံ့သကာရည်တွေ ရောစပ်ထားတဲ့ အပြုံးလေးအောက်မှာ ကျွန်တော်ရူးမိုက်စွာ တသွင်သွင်စီးဆင်းနေမိပါပြီ။ မွတ်ဖန့်နေတဲ့သူ့မျက်နှာ ပြင်လေးကို စိတ်ကူးနဲ့တွေးကြည့်ရုံ နဲ့ပင် ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် ရင်ခုန်သံရထားကြီးကတဒုန်းဒုန်း တဝုန်းဝုန်း ကျယ်လောင်စွာ ခုတ်မောင်းနေပြီဖြစ်သည်။ ဝီလျှံတဲလ်ရဲ့ မြှားချက်တွေလိုပဲသူ့အပြုံးတစ်ခုဖန်ဆင်းလိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲကို လာရောက်ထိမှန်သည့် မျှားတွေကအညတရအဆိပ်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်နှလုံးသားကို မူးမေ့နေစေသည်။
အချစ်ဆိုတာ ဂန္တဝင်မြောက် ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုပဲ
အဆောင်ရှိ ကျောင်းသား/သူတွေ ကျောင်းသွားကုန်ြကသည်။ စာကျက်ခန်းထဲတွင် ကျွန်တော်နှင့်သူနှစ်ယောက်ထဲသာရှိနေသည်။ သူကအပြင်ဖြေ ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းမတက်ရပါ။အခုလောလောဆယ်တော့ အဆောင်တွင်သူတစ်ယောက်ထဲသာ အပြင်ဖြေ ရှိသဖြင့် တစ်ဆောင်လုံးတွင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းသာ။ ဆရာကလည်း နေ့လည်ခင်း တစ်ရေးတစ်မော အိပ်နေသည်။
ကျန်သည့်guide ဆရာမလေးကလဲ အိမ်ပြန်သွားချေပြီ။ ကျွန်တော်နှင့်ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ စားရေးခုံပေါ်တွင် သူစာလုပ်နေသည်ကို ကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိသည်။ ထိုအခိုက် ကျွန်တော်ခိုးကြည့်တာကိုသိနေသည့်အလား သူမြော့ကည့်လာသည်။
ရုတ်တရက်မျက်ဝန်းခြင်းဆုံတော့ ကျွန်တော်ခြေမကိုင်မိလက်ရကိုင်မိဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်တော့်ပုံစံကြိုကည့်ပြီးသူက ပြုံးသည်။ ထိုသြို့ပုံး လိုက်တိုင်းကျွန်တော်ထိုအပြုံးလေးအောက်မှာ တိမ်းညွတ်မိရသွားသည်ချည်းသာ။ ကျွန်တော်သူ့ကို ရင်ဆိုင်ြကည့်မနေတော့ပဲ ခေါင်းကို ငုံ့လိုက်ြပီး စားပွဲပေါ်ရှိ text bookကြီးကိုဟိုလှန်သည်လှန်လုပ်နေလိုက်သည်။ ခဏကြာတော့ ကျွန်တော့်ထံလျှောက်လာသော သူ့ခြေသံကိုကြားရသည်။
ကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်နှင့် သူကဂျင်းဘောင်းဘီထဲမှ ဖုန်း ကိုထုတ်ကာ ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသွက်လက်စွာ နှိပ်လိုက်ြပီး missed call ခေါ်ကာပြန်ချလိုက်သည်။
" ဆရာလေးအားရင် ကျွန်တော့်အိမ်လိုက်လည်ပါလား။ "
"ဒီနေ့တော့မအားသေးဘူး နောက်ရက်မှလိုက်လည်မယ်လေ။ အိမ်မှာ အမေကတစ်ယောက်ထဲဆိုတော့အိမ်အလုပ်တွေငါပဲလုပ်ရတာ။ "
အမှန်တစ်ကယ်တော့ ပြောသလောက်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမှသာ မေမေ့ကိုဟင်းချက်ကျွေးတာမျိုးလောက်လုပ်ြခင်းဖြစ်သည်။ အိမ်မှု ကိစ္စအဝဝကို မေမေကသာ ထောင့်စေ့အောင်လုပ်နေကြပင်။သို့ပေမယ့် သူ့ ကိုကျွန်တော်ညာလိုက်သည်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိပါ။
"ဆရာလေးတို့အိမ်ကို ကျွန်တော်လိုက်လည်ချင်တယ် ရမလား"
ရုတ်တရက်ကျွန်တော်ဘာပြောရမှန်းမသိတော့။ ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားရင်း သူ့မျက်နှာ ကိုငေးကြည့်နေမိသည်။ ကျွန်တော့်အိမ်ကို လိုက်လည်မည်တဲ့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမှာပါလိမ့်။သူနဲ့အတူရှိနေချိန်တွင် အမြဲတမ်းရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်နေတတ်သည့်ကျွန်တော်က
သူ့ကိုအိမ်ခေါ်သွားပါက မတော်လို့မေမေရိပ်မိသွားလျှင် အသက်နဲ့ကိုယ်အိုးစားကွဲရချည်ရဲ့။
"ဟို မင်း အင်း မင်းစာကျက်ပျက်နေမှာ ပေါ့။ သဘက်ခါကျရင် chemistry ဖြေဖို့ပြောထားတယ်မို့လား။”
"ဆရာလေးကလည်း ခဏလေးလည်တာပဲကိုလိုက်လည်မယ်နော် နော်ဆရာလေး"
သူရဲ့အပြောအောက်မှာ ကျွန်တော်ယိုင်လဲတိမ်းညွတ် သွားပါသည်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို သတ္တိမရှိဘူးဟုပဲပြောရမလား သရဲဘော ကြောင်တယ်ဟုပဲ ပြောရမလားမသိပါ။ကျွန်တော်သူ့ကိုအိမ်ခေါ်လည်ဖို့လေးတောင်မဝံ့ရဲခဲ့။
"ဆရာ့အိမ်မှာက စက်ချုပ်သင်တဲ့ကောင်မလေးတွေ အများကြီးနဲ့ မင်းနေရထိုင်ရခက်နေမှာပေါ့။တနင်္ဂနွေ နေ့ရောက်မှလိုက်လည်လေ။ အဒဲီ့အချိန်ဆို သူတို့မရှိဘူး အေးအေးဆေးဆေးလာလည်လို့ရတာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား"
သူ့မျက်နှာ လေးညိုးနွမ်းသွားသည်။ ကျွန်တော်စိတ်တော့မကောင်းပါ။ ကျွန်တော့်စကားကိုပြင်ြပီးခေါ်ဖို့စဉ်းစားကြည့်သေးသည်။ သို့ပေမယ့်ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကျွန်တော့်နှုတ်က ထွက်မလာခဲ့ပါ။ကျွန်တော့်ရှေ့ မှနှုတ်ဆိတ်ထွက်ခွာ သွားသောသူ့ကြိုကည့်ရင်း ကျွန်တော့်အသည်းတွေ ဓားနဲ့တမြေ့မြေ့အမွှန်းခံရသလိုခံစား နာကျင်သွားသည်။ ကျွန်တော်ဘာကြောင့်များသူ့ အပေါ်ခံစားချက်တွေ
ရက်ရက်စက်စက်ပြင်းထန်နေပါလိမ့်။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာသူ့ကိုနင့်နေအောင်ချစ်မိနေပြီဆိုတာပါပဲ။
အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ ကျွန်တော့်နှလုံးသားကို ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ ဖြစ်အောင်လှုတ်ခတ်နိုင်သူ အပြုံးလေးရယ် မင်းကိုကိုယ် အသည်း တွေဆတ်ဆတ်တုန်အောင်ချစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်အဖြစ်သည်းလွန်းရာ ကျသွားမလားပဲ။ အဆောင်မှ နေ့လည် ထမင်းစားချိန်ရောက် တော့ သူပြန်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သူ့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်း ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးမှု အပြည့်ဖြင့်ပီတိတွေစားလို့မကုန်အောင် ရွှန်းရွှန်းဝေ နေသည်။
ဗိုက်ထဲကလည်း တကြုတ်ြကုတ်ဆာလာပြီမို့ ကျွန်တော်လည်း ဆိုင်ကယ်စက်နှိုးကာအိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ မေမေ က ထမင်းပွဲပင် အဆင်သင့်ပြင်ပေးထားသည်။ကျွန်တော်ဗိုက်ဆာဆာနှင့် လက်ဆေးဇလုံယူကာ လက်ဆေးလိုက်ပြီး ထမင်းပွဲရှေ့ တွင် ထိုင်ကာအားရပါးရလွေးရန်ြပင်လိုက်၏ ။ ထိုစဉ်အိမ်ရှေ့မှ မေမေ့အသံထွက်လာသည်။
"သားရေ ………..ချစ်ရဲအောင် ဒီမှာ သားနဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရောက်နေတယ်"
"လာပြီ ………..အမေ ခဏလေး"
လက်ကိုလက်ဆေးဇလုံထဲ ပြန်နှစ်ဆေးလိုက်ြပီး လက်သုတ်ပုဝါဖြင့်သုတ်ကာအိမ်ရှေ့သို့ကမန်းကတန်းထွက်လာခဲ့၏။ဘယ်သူများပါလိမ့်။ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ကျွန်တော်ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရသည်။
ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းကောင်လေးက ပြုံးပြသည်။ ဘုရားဘုရား သူကျွန်တော့အိမ်ကိုဘယ်လိုလုပ်သိသွားတာပါလိမ့်။ မဟုတ်မှလွဲရော ကျွန်တော့်နောက်က ချောင်းပြီးထပ်ြကပ်မကွာလိုက်လာဟန်တူသည်။ ကျွန်တော့်အနားသို့မေမေက မပြောမဆြိုဖင့် ရောက်ချလာသည်။
"သူက ဘယ်သူလေးလဲသား သားသူငယ်ချင်းအသစ်လား"
"မဟုတ်ဘူးအမေ အဆောင်ကကျောင်းသား တစ်ယောက်ပါ။"
"ဟယ်.......ဟုတ်လား အိမ်ထဲခေါ်ဦးလေသားရဲ့ ကိုယ့်အိမ်ကိုလာလည်တဲ့ သူကိုဒီအတိုင်းရပ်ြကည့်နေရလား"
ကျွန်တော်မေမေ့ကို ဘာမှမပြောတော့ပဲ ဘေးဘီကိုတစ်ချက်ဝြှေ့ကည့်လိုက်၏။ ထင်သည့်အတိုင်းပါပင်မေမေ့တပည့်မလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ပွစိပွစြိဖင့်တိုးတိုးလေး ပြောနေကြသည်။
"ကောင်လေးက လူချောလေးပဲ။ သားလေး ထမင်းစားပြီးမှပြန်နော်သိလား"
"ကျွန်တော်ဆာပါတယ် ……….အန်တီ "
ကျွန်တော်သူ့ကို စိတ်အချဉ်ပေါက်ပေါက်ြဖင့်မျက်လုံးကိုပြူးကြည့်လိုက်သည်။ ကောင်လေးက ကျွန်တော့်ကိုမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ြပပြီး မခိုး မခန့်လုပ်နေသည်။ ဘာတက်နိုင်သေးလဲဟူသော သဘောပင်။ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် ဝမ်းသာစိတ်ရော အြံ့သစိတ်ရော ရောယှက်ကာ နှလုံးသားက နူးညံ့ညင်သာစွာလှုပ်ရှားနေသည်။
"ဟုတ်သားပဲသားရယ် လာ လာ တစ်ခါတည်းဝင်စားရအောင်။ ဟဲ့သား ခေါ်လေကောင်လေးကို’
သည်တစ်ခါတော့ကျွန်တော် သူ့ထက်အရင်ဦးအောင် ပြုံးပြလိုက်သည်။ထို့နောက်တစ်လုံးထဲပြောလိုက်သည်။
ထမင်းစားခန်းထဲရောက်တော့ မေမေနှင့်သူက စကားလက်ဆုံကျနေကြသည်။ ကျွန်တော်ကဘယ်လိုစာသင်ကောင်းတာဘာညာဖြင့် မေမေ့ကိုရွှီးနေ၏။ မေမေကလည်းသူပြောသမျှသဘောအကျကြီးကျနေလေသည်။ သမက်နှင့်ယေက္ခမလိုက်လဲလိုက်သည်ဟု
ကြံဖန်တွေးပစ်လိုက်သည်။ ထမင်းဝိုင်းတွင် နှုတ်ဆိတ်နေရသူကတော့ ကျွန်တော်ပင်။
"သား သားတပည့်ကိုဟင်းတွေထည့်ပေးလိုက်ဦးလေ။ သူ့ထမင်းပန်းကန်ထဲမှာထမင်းအဖြူတွေပဲရှိတယ်”
"ရော့ ထဲ့စားလေးကွာ ဒါက ငါးသလောက်ပေါင်း ဒါက သရက်သီးသနပ် ဒါက ဟင်းချို။ ဟင်းချိုကတော့ကိုယ့်ဟာကိုခပ်သောက်’
သူကကျွန်တော်ပြောသမျှ အပြုံးဖြင့်သာတုနြ့်ပန်သည်။ အမြဲတမ်းပြုံးနိုင်လွန်းသည့်သူ့ကိုကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ ထွေးပိုက်ထားချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာသည်။
"အန်တီကစားပြီးပြီသားရဲ့ သားတို့နှစ်ယောက်ပဲစားကြပါ။ ပြီးရင်အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောကြဦးအန်တီအရှေ့ မှာ အဝတ်ချုပ် နေတာတန်းလန်းကြီးမိုလို့သွားလိုက်ဦးမယ်’
မေမေထွက်သွားတော့ သူကကျွန်တော့်ကိုစကားစလာသည်။ "ဆရာလေးအမေက အရမ်း သဘောကောင်းတာပဲနော်။ ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုအမေမျိုးတစ်ယောက်လောက်လိုချင်သားဗျ"
"မရှိတော့ဘူး အဖေရယ်အမတစ်ယောက်ရယ်ပဲရှိတယ်။ "
"ဪ ငါ့မှာလဲမောင်နှမမရှိဘူးကွ ငါကမင်းလိုချစ်စရာကောာင်းတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်လောက်လိုချင်သေးတာ။ ငါ့အဖေက စောစော သေသွားတော့ မရတော့ဘူး "
"ဒါဆိုကျွန်တော့်ကိုပဲ ညီလေးလို့သဘောထားပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လေ ဆရာလေးကိုအရမ်းခင်လို့ အိမ်ထိလာလည်တာပါဗျာ။ ကျွန်တော်ဆရာလေးမကြိုက်တာကို ဇွတ်လုပ်မိသလိုဖြစ်သွားရင် ကျွန်တော့်ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်’
"ဘာကိစ္စစိတ်ဆိုးရမှာလဲ ညီလေးရာ ။ "
"ဟား ဒါဆိုကျွန်တော်အကိုတစ်ယောက် ရပြီပေါ"့
ကျွန်တော့်စကားကြောင့် ပြုံးပျော်နေတဲ့သူ့ကြိုကညြ့်ပီး ကျွန်တော်မျက်ရည်မလည်မိအောင် သတိထားရသည်။ ထိလွယ်ခိုက်လွယ်တဲ့ ကျွန်တော့်နှလုံးသား နုနုထွတ်ထွတ်လေးကအချစ်ရည်တောက်ပစွာ ရွှန်းလဲ့နေသည်။ ရင်ခုန်လှိုက်မောမှုတွေက အမည်တပ်လို့မရအောင်
ထူးခြားနေလွန်းသည်။ အချစ်ဆိုတာ ဟန်ဆောင်မှုတွေများတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်သင့်မခံချင်တော့သလိုလိုပါပင်။ ကျွန်တြော်ကုံ တွေ့နေရတဲ့ အချစ်ကရိုးသားဖြူစင်လွန်းစွာ ပျားရည်လိုချိုမြမှုရှိလှပါသည်။
"အင်း လူတွေရှေ့ဆိုရင်တော့ မင်းကငါ့ကျောင်းသားပေါ့ ကွယ်ရာကျရင်တော့ ငါ့ညီလေးပေါ"့
စိတ်ထဲမှာ ဆိုရင်တော့ ငါချစ်သူပေါ့ ဆိုတဲ့စကားကိုတော့မျိုသိပ်ထားလိုက်သည်။
"ကျွန်တော့်အကိုဆိုတော့ ဆရာလေးအဲ့ အကိုလေးက ညကျရင်အိမ်မပြန်နဲ့တော့ ကျွန်တော်နဲ့လိုက်အိပ်။ ကျွန်တော့် အခန်းက အကြီးကြီးပဲ အိပ်ယာက လည်းအကျယ်ြကီးပဲ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲနေတာ။ အကိုလေးနဲ့ဆိုတော့ အိပ်ရမှာ ပျော်စရာကြီး ညအိပ်ရင်ခွထားမယ်ဖက်ထားမယ် ပြီးရင်....."
"မင်းကငါနဲ့အိပ်ရဲလို့လား ငါကအအိပ်ြကမ်းတယ်နော် မထင်ရင်မထင်သလိုဘေးနားမှာ ရှိတဲ့သူကိုကန်ချတတ်တယ်’
ကျွန်တော့်စကားကြားတော့ သူသွားပေါ်အောင်ရယ်သည်။ သွားလေးတွေကလည်း ညီညာပြီးဖြူဖွေးနေသည်။
"ဆရာလေး ညနေအဆောင်ကို စောစောလာနော် ကျွန်တြော်ပန်တော့မယ် အဖေမျှော်နေမှာ စိုးလို့’
ထို့နောက်သြူပန်သွားသည်။ သူမရှိတော့မှ ကျွန်တော့်နှလုးံ သားက ကျွန်တော့်ကိုစကားပြောလာသည်ပဲ "ခဏကကောင်လေးကို သိပ်ချစ်တယ်"တဲ့။
Posted by Alex Aung at 2:07 PM
Pls post part2asap. Thanks
အကိုေ၇ ဒုတိယပိုင်းဘယ်တော့တင်မှာလဲဗျ မြန်မြန်လေးလုပ်ပါ ဖတ်၇တာ အ၇မ်းမိုက်တယ် အောင်မြင်ပါစေဗျ i love you and god bless you
ko alex ကခင်များတို့ကို ညှင်းထားတာ။ ကျွန်တော်အကုန်ရေးပြီးပို့ထားပေးပြီးပြီးနော် ဟိဟိဟိ